चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो रिपोर्ट – Gulmiews
चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो रिपोर्ट
October 13, 2016 Sanju Kauchha
झट्ट हेर्दा सुदुर दुर्गम गाउँ जस्तो लाग्छ त्यो बस्ती । स-साना खरले छाएका झुपडी । पालीमा झुण्ड्याईएका फाटेका लत्ता-कपडा अनी मकैका झोँता र पिँढी बाँधिएका पशु चौपाया । गुल्मी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ बलिथुम गाविसमा पर्ने बोटेगाँउ रुद्राबेणी-वामी सडक खण्डको मजुवा बजारबाट १० मिनेटको पैदाल यात्रामा पुगिने ठाउँ हो । तर नजिकैबाट गाडीमा हुईँकिने हामीहरुलाई यो गाउँको बारेमा शायदऐ थाहा होला । गुल्मीको खोला किनरमा बस्ने यि सिमान्तकृत माझी समुदायको जिन्दगी हामीले कल्पना गरेको अझै पनि सामान्य र निम्नस्तरको छ । सामान्य जीवन यापन गर्न पनि धौ-धौ छ । कसैको त घर र गोठ एकै ठाउँ छ। घर भित्र सुत्ने ठाउँ छैन, पिँढीमै रात कटाउनु पर्छ । यिनिहरुलाई दसैं तिहार केवल पात्रोमा मात्रा आउछ । तर यो बर्षको दसैं उनिहरुको लागि वास्तबिक दसैं कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भयो । गुल्मी क्षेत्र नं. २ का सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारीले यो खुशी दिएका थिए । बडादसैंको दिन आफ्नो घरमा परिवारसँग दसैं मनाउन छोडेर किन बोटेगाँउका माझिहरुसँग दसैं बनाउन पुगे? हेरौँ त्यहाँबाट रबिलाल पौडेलले तयार पार्नुभएको भिडियो रिपोर्ट:
Related Posts	तराई पाहड छुटाउन दिन्नौं : एमाले नेता विष्ट...	October 19, 2016	कुमारी आमा बन्न वाध्य दलित किशोरीहरु...	October 19, 2016	Comments are closed.
ताजा अप्डेट	पहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन